INokia D1C elindelekile ingaba ithebhulethi hhayi i-smartphone Izindaba zamagajethi
Uma ungomunye wabasebenzisi abalinde ukwethulwa kweNokia smartphone ephethwe yi-Android, kungaba ngenxa yelukuluku noma ngoba kuyinto yakudala, kungadingeka ukuthi silinde isikhashana. Ngemuva kokuthengiswa kokwehlukaniswa kwamaselula neMicrosoft eminyakeni embalwa eyedlule, iNokia D1C ebilindelwe kakhulu kungenzeka ingabi yi-smartphone elindelwe yiwo wonke umuntu. Njengoba sikwazile ukufunda eGeekbench le divayisi izoba yithebhulethi enkulu, amayintshi angu-13,8 aphethwe yi-Android 7.0. Uma ekugcineni kuqinisekiswa, abakwaNokia bazoqala ngonyawo olungafanele ekubuyiseleni kwabo emhlabeni wezingcingo.
Ukuthi iNokia ikhetha ukubuyela emakethe nethebhulethi yobukhulu obunjalo kungumqondo ophazamisayo, ngoba ulwazi lomkhiqizo waseFinland kulesi sigaba luyakhathaza impela. Ngenkathi amaphilisi okuqala eqala ukufika emakethe, abaningi bekungabasebenzisi abathola eyodwa yokuzama ukufaka ikhompyutha ababengayisebenzisanga neze. Kepha leso sikhathi sesiphelile futhi ukuthengiswa kwamathebulethi kwehla unyaka nonyaka yize abakhiqizi beqhubeka nokubheja ngawo.
Ngokuya nge-GFXBench, iNokia D1C izoba nesinqumo sango-1920 x 1080, isixazululo esibi kakhulu sosayizi omkhulu kangaka wesikrini. Le thebhulethi izophathwa ngu I-3 GB ye-RAM ne-Snapdragon 430, i-chip esezingeni eliphakathi kakhulu. Ngokuqondene nokugcinwa, sithole i-16GB yangaphakathi ehlala ku-9 ngemuva kokufaka lonke uhlelo lwenkampani nezinhlelo zokusebenza. Ukuphela kwento egqamile ngamakhamera amabili, i-16 mpx ngemuva ne-8 mpx ngaphambili.
Ngokuya ngolwazi esinalo kuze kube manje futhi uma ekugcineni kuyithebhulethi iNokia esethula yona, akubonakali ngathi izophinde ingene ezweni lezingcingo ngonyawo lwesokudla ngethebhulethi, okuyisetshenziswa okwamanje esisezingeni eliphansi yini futhi usafuna ibhentshimakhi emakethe yethebhulethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » INokia D1C elindelekile ingaba ithebhulethi hhayi i-smartphone
I-Steam ingeza ukusekelwa kwendabuko kwesilawuli sePS4, iDualShock 4